မယ်သံ: January 2015
သမီးလေး အကြောင်းတွေ အမှတ်တရရေးခဲ့တာတွေ ပြန်ဖတ်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၀၁၄ မှာနောက်ဆုံးပဲ ။ သမီးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရတွေ ကို တိုတိုထွာထွာသာ မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်မှာ ရေးဖြစ်တယ် ။
မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်မှာ ရေးတာတွေက ပြန်ဖတ်ဖို့ရှာရင်ခက်တာကြောင့် သမီးလေး ကြီးလာရင် ဖတ်ရအောင် ဘလော့မှာ ကူးထည့်လိုက်တာ ။ ဆားချက်တယ် လို့လဲ ပြောနိုင်ပါတယ် ။
ကူးလို့သာ ကူးထည့်ရ ဘာမှမသေချာတဲ့ လောကကြီးမှာ သမီးလေးကြီးလာတဲ့အခါ မျက်နျာစာအုပ်ရော ၊ ဘလော့လေးပါ ရှိမရှိမသေချာ ။ ရှိနေသေးရင်တောင် သမီးလေးက ဖတ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားဖို့ အချိန်ပေးဖို့မသေချာ ။ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာစာ ဖတ်တတ်ဖို့ မသေချာ ။ တကယ့်ကို ဘာဆို ဘာကမှ မသေချာ .........................................
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ကိုယ်အိမ်အပြန်နောက်ကျတယ် ။
အိမ်ရောက်တော့ သမီးလုပ်သူက မေးနေတာ .....
" မေမေ ကုလားကြီးဆိုတာ ဘူသူတုန်း ၊ မေမေ့ မေမေ ဘာလို့ ကုလားကြီးနောက်ကို လိုက်သွားတာတုန်း၊ မေမေ ဘာဖြစ်လို့ ကုလားကြီးနဲ့ သွားတွေ့တာတုန်း " နဲ့ တတွတ်တွတ်မေးတော့တာ ။
အဲဒါနဲ့ မဟုတ်သေးပါဘူးအေ ဘာလို့မေးတာတုန်းဆိုတော့ ဖေဖေ က မေမေကုလားကြီးဆီသွားတယ် ဆိုလို့တဲ့ ။
သြော် ကိုယ်တွေ ငယ်တုန်းကလဲ အဖေ အိမ်ပြန်နောက်ကျလို့မေးရင် အမေက အဲလိုဖြေရင် တိတ်သွားတာ အဖေပြန်လာလဲ အဲလိုမမေးမိဘူး ပေါ့လေ ။ အမေက ငေါ့တတ်တာကိုပဲ သိလို့လား၊ ကိုယ်ပဲ ပြန်မေးရမှန်းမသိလို့လား မသိ။ အမေ့ကို အဲလိုတွေ မမေးဖြစ်ဘူးပဲတွေးမိပါတယ် ။
ဟောာ ဒီရက်တွေ သူ့အဖေ အိမ်ပြန်နောက်ကျတော့ ထုံးစံအတိုင်း သမီးတော်လေးက မေးပြန်ရော။ ကိုယ်လဲ ညီးအဖေ ကုလားမကြီးဆီသွားတယ်လို့ ဖြေလိုက်တော့..............
" ဟားဟားဟားဟား ဖေဖေ ကုလားမကြီးဆီသွားတာလား ဟားဟား " ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုလှောင်သလိုတောင် ရယ်သေးသတော့ ။
အဲတော့မှ ကိုယ့်တုန်းကလဲ သူမသိလို့မေးတာမဟုတ်ပဲ တမင်ရစ်ချင်လို့ မေးမှန်းသိတော့တာ ။ အော် အ လိုက်တဲ့ ငါ့နှယ် .................။
မေမေ ပျော်နေတာပါးစပ်စိမရဘူး :D :D
HSECOND SEMESTER : TEACHER'S REMARK
Hay Mar is pleasant girl . She takes good care of her belongings. She is attentive during all lessons. She has done well in all her classwork. Well done!
မေမေ ။ ။ (သမီး ကို မုန့်ကျွေးနေရာမှ စိတ်မရှည်သောအသံဖြင့် ) မြန်မြန်စားလိုက် သမီး ။ တော်ကြာ အခန်းထဲက မမ ထွက်လာရင် ကျွေးနေရလိမ့်မယ် ။ မမ စားသွားရင်သမီးမစားလိုက်ရပဲနေမယ်နော် ....
ဟေမာ။ ။ I have not much mommy but I can share .
မေမေ ။ ။ ( ရှက်တက်တက်ဖြင့် ) တော်လိုက်တာ သမီးလေးက ဂွတ်ဂဲလ်လေးပဲ :P
သမီးလေး အမြဲတမ်း လောဘဒေါသ နည်းစွာဖြင့် SHARE နိုင်ပါစေ ။
(ဖေဖေ ။ ။ သမီး မေမေ နဲ့ မတူပါစေနဲ့ ) တိန်
အပြင်ကို သွားရ စားရပြီဆို ဂလိုရုပ်မျိုး ။ သမီးကလေး မအေတူချက်
သမီးလေးကို ပုံပြင်ပြောပြတဲ့အခါ မပြောခင် သူ့ရဲ့ ရုပ်ပုံကားချပ်တွေ သွားကြည့်ပြီး အီးလို ဘယ်လိုပေါင်းတယ်ဆိုတာကို မသိမသာကြည့်ထားရတယ် ။ ပြောရင်းနဲ့ သူ မသိတော့ရင် အိုင်ပက်မှာ ရှာပြရတာမျိုး ။ မထွေးလေး မြွေကြီး နဲ့ ယူတော့ မြွေကြီးဟာ snake လား dragon လား ဆိုတာ ကိုယ်က ပြောပြနိုင်မှ ဖြစ်မယ်။ ဒီလို ပြောလိုက် မသိတာ ထရှာလိုက်ဆိုတော့ ပြောရင်းနဲ့ သူ အိပ်ပျော်သွားမှာကိုတော့ မျှော်လင့်လို့မရဘူးပေါ့ ။ ပြောရရင် ကိုယ်တို့ ငယ်တုန်းကလို အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်များတော့ မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ ။ မအေ နဲ့ သမီးလေးကြား firm bonding ဖြစ်အောင်သာ ပြောရတာမျိုး ။ တခါလေ လဲ စိတ်က သိပ်မရှည်ရင် မအေ ရဲ့ ဗီတိုအာဏာ နဲ့ ငေါက်ဆတ်ဆတ်ပြောပြီး ရပ်ပလိုက်တာမျိုး ။ အဲဒါမျိုးဆိုလဲ သူက ကိုယ်တို့ငယ်တုန်းကလို မျက်တောင်လေး ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့ ငြိမ်သွားမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး ။ သူ့အဖေဆီသွားပြီး သွားတိုင်တာပေါ့ တိုင်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး မေမေ့ကို ဆူလိုက်ပါဆိုတာ ပါသေးတယ် ။ အိမ်မှာ သူ့အဖေ က ပိုအာဏာရှိတယ်လို့များ ထင်နေလားမသိ ကတောက်စ်.....:D
သမီးလေးက ငယ်ငယ်လေးတုန်းက မြန်မာမှာတလှည့် ဒီမှာတလှည့်နေတာဆိုတော့ ကာကွယ်ဆေးကို ဟိုမှာ ထိုးလိုက် ဒီမှာထိုးလိုက် ။
ဒီမှာ ထိုးတော့ အစက ပိုလီကလင်းနစ်မှာ ထိုးတယ် ။ နောက်တော့ ပိုလီကလင်းနစ်သွားရင် စောင့်ရတာ နောက် မကျန်းမာတဲ့လူတွေကြား ကလေးနဲ့ အကြာကြီးဆိုတော့ အပြင်ဆေးခန်းမှာပဲထိုးတယ်။ ဘယ်မှာပဲ ထိုးထိုး Record တော့ရှိရတယ် ။ မရှိရင် ကျောင်းအပ်ချိန်ကျ အခက်ခဲဖြစ်မယ် ။
ဒါပေမယ့် ပိုလီကလင်းနစ်ကျတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးရုံတင်မဟုတ်ဘူး ။ သူ့အရွယ်အလိုက် ဖွံ့ဖြိုးမှူတွေအတွက် Child Developmental Screening / Assessment at .(age)......တွေပါတယ် ။
သမီးလေးအတွက် အဲဒါတွေ မစစ်ပေးခဲ့မိတော့ သုံးနှစ်ပြည့်တုန်းက ပိုလီကလင်းနစ်ကို သွားပြတော့မှ ဆရာဝန်ကို ပြောပြတော့ ကိတ်စမရှိဘူး ။ ဒါတွေ ကိုယ့်ကလေး ဖွံ့ဖြိုးမှူရှိမရှိ မိဘတွေလဲသိတာပဲဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ပြီး ဖြည့်လိုက်ပါတဲ့ ။ ကိုယ့်ကလေးက ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးနေတယ်ပဲ ကိုယ်ကထင်နေပေမယ့် တကယ်တော့ သူ့အရွယ်အလိုက်မှာ ဘာတွေကတော့ ဖွံ့ဖြိုးတယ် ဘာတွေကတော့ ဖွံ့ဖြိုးပေမယ့် ပုံမှန်ထက် နည်းနည်းနောက်ကျတယ် ဆိုတာတွေကို သိနိုင်တာပေါ့ ။
ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ သွားစားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသူတစ်ဦး :D
ဒီနေ့ မင်္ဂလာဝိဟာရကျောင်းမှာ မြန်မာစာ လာသင်တဲ့ကလေးတွေကို အိမ်နီးချင်းက ဆီချက်ခေါက်ဆွဲကျွေးမှာလို့ပြောတော့ မီးမီးလဲ မြန်မာစာ သွားသင်မယ်တဲ့ ။
ညီးက တတ်လို့လားဆိုတော့ ကကြီး ခကွေး ဂငယ် နဲ့ ရွတ်ပြနေတာ ။ အဲလိုတော့လဲ မဟေမာ တို့ အဟုတ်ပဲ တော့ ...
သမီးလေး က သူ့အဖေကို မျက်နှာကြည့် အလိုက်သိပြီး မအေကိုတော့ သူ့အိတ်ထဲကလို့ အပိုင်တွက်ထားတယ် ၊
မေမေ ဟာ သူ့အတွက် အရာရာအဆင်သင့်ဆိုတာ ဘယ်လိုများသိနေပါလိမ့် <3>
ဒါပေမယ့် ဘာမဆို မေမေ လုပ်ပေးမှ
မေမေ မိုင်လိုလေး သွားဖျော်ပေးပါလား ( ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း တီတီဖျော်တာသောက်ချင်ဘူး မေမေဖျော်ပေး)
မေမေ ဟေမာ ရှူးရှူးပေါက်ချင်လို့
မေမေ့ ဖေဖေ့ကို စကားမပြောနဲ့လေ
မေမေ ဟေမာ ဘာဘီကြက်ဥ လိုချင်လို့
မေမေ ဟေမာ့ကို စတော်ဝယ်ရီဝယ်ကျွေးဦးလေ
မေမေ ဟေမာ ဟယ်လိုကစ်တီ ကြိုက်တယ်လေ
မေမေ ဟေမာယူထားတာ ဘာလို့ပြန်ချထားခဲ့တာလဲ
မေမေ လဲ ရူးခါနီးနေပါပြီ သမီးရယ်:P
December 12 ,2014
ဟေမာ့ လက်ရာ ကားလေး <3 i="">
သမီးလေးက မအေထက် စမတ်ဖြစ်တယ် ။
တခုခုဆို သူလိုချင်တာ မလိုချင်တာကို ကွဲကွဲပြားပြား သိလဲသိတယ် ။ တွေလဲမတွေဝေဘူး ။ မအေ နဲ့ တူပြီး မကောင်းတဲ့အကျင့်က စိတ်မရှည်တာပဲ ။ အရောင်ခြယ်တာမှာ စိတ်ရှည်ရင် ညီပြီး သေချာလှအောင်ခြယ်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ခုကနေ သုံးခုဆိုရင် စိတ်မရှည်တော့ ဆွဲခြစ်ပလိုက်ရော ။
အရောင်တွေဆို သမီးက အသီးတွေကို သိတယ် ။ ပန်းသီးဆို အစိမ်းရောင် ပန်းရောင်ခြယ်ရမယ်။ မာကလာသီးဆို အစိမ်းရောင် ခရမ်းချဉ် စတော်ဘယ်ရီဆို အနီရောင်ပေါ့ ။ အမယ် သူခြယ်မယ့် အရောင်ကိုကြည့်ပြီးပြောသေးတာ တခါ စတော်ဘယ်ရီကိုအနီခြယ်ရမှာ သူ့ခဲတံအရောင်က ပန်းဆီအနီကြီးဖြစ်နေလို့ မာမီ ဒီကာလာကို ဟေမာ satisfy မဖြစ်ဘူး နောက်တခါ စတော်ဘယ်ရီအနီရောင်ခဲတံရှာဝယ်ပေးပါ ဆိုပဲ ။
စိတ်မကောင်းစရာက ပန်းအရောင်တွေကို သမီးမသိဘူး ။ ဒီလောက် ပန်းတွေကြားမှနေ ပန်းတွေကို သိပ်ချစ်တဲ့ မေမေ့ မှာ သမီးလေးက ပန်းအရောင်တွေကို သိပ်မသိဘူးဆိုတော့ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး ။ ပန်းတွေဆို ခြယ်ချင်တဲ့အရောင်တွေခြယ်လိုက်တယ် ။
၂၀၁၃ မတ်လမှာ သမီးက play group တက်တာ တနေ့မှတနာရီခွဲရယ် ဆိုတော့ သူပျော်တယ် ။ ၂၀၁၄ဇန်န၀ါရီမှာ child care N1 တနေကုန်ကျောင်းထားတော့ သူမပျော်ဘူး ။ တနေကုန် အီးလို တရုတ်လို ပြောကြတဲ့သူတွေကြားမှာ ၊ အစားပုပ်တဲ့သမီးလေး နေ့လည်စာကို ကျောင်းကကျွေးတဲ့ ပုံစံခွက် ခေါက်ဆွဲတွေ စွပ်တွေစားရတဲ့အခါမှာ သူ သိပ်စိတ်ညစ်ရှာမှာ ။ ညနေ သွားကြိုတိုင်း မုန့်ယူသွား အိမ်ရောက်အောင်မစောင့်နိုင် သိပ်ဆာနေတော့ တန်းကျွေး၇တာ ။ သူကလဲ ကျောင်းမသွားချင်လို့ ငိုတာတွေရှိသလို ကျောင်းကဆရာမတွေကလဲ.. နင်တို့ အိမ်မှာ အီးလိုမပြောဘူးလား နင့်သမီးက ပြောရင်မသိဘူး ဆိုတာမျိုး ပြောတာခံရတယ် ။ ကိုယ်တွေကတော့ အိမ်မှာ မြန်မာစကားပဲပြောဖြစ်တယ် ။ သမီးလေး မတူညီတဲ့ အသိုင်းအ၀န်းထဲ ၀င်ခဲ့ရတာ သိပ် stress များခဲ့ရှာမှာပဲ ။ အခုတော့လဲ သမီးလေးအခြေအနေ ဆရာမတွေကိုမေးတော့ ချီးကျူးကြတယ် ဟေမာ သိပ်တော်တာပဲ တဲ့ ။ တခုခု ဆို တခါပြောထား မှတ်လဲမှတ်မိတယ် ။ သူ့ပစ္စည်းလေးတွေဆို သိမ်းတယ် စည်းကမ်းရှိတယ် တဲ့ ။
ကျောင်းမှာလဲ သမီးနာမည် က ဟေမာပဲ ။ ဒီနာမည်လေးကို အကုန်လုံးက ခေါ်တတ်တော့ အဆင်ပြေတယ် ။ မေမေ ကလဲ သမီးနာမည်ကို အင်္ဂလိပ်နာမည်တွေ ဘာတွေမပေးချင်ပါဘူး .
သမီးရေ မေမေက အီးလိုလဲ သိပ်မလည် ၊ တရုတ်စကားလဲ မတတ်တော့ နောက်ပိုင်းမှာ သမီးနဲ့ မေမေ စကားမပေါက်ပဲ အလှမ်းကွာမှာ သိပ်စိုးတာပဲ ။ မေမေ ကြိုးစား၇မှာပေါ့နော်
December5,2014
အိမ်က မယ်လက်တောက် မောင်လေးလိုချင်နေတာ ။
တချိန်လုံး ပူနေတဲ့မအေ ဗိုက်ကို ကိုင်ပြီး မေမေ အထဲမှာ ဘေဘီလေးလားနဲ့ မေးနေတာ ။ သနားတာနဲ့ ဒီအရုပ်လေးဝယ်ပေးမလို့ဟာ ဟင့်အင်းဒါကဘေဘီဂဲလ်လေးတဲ့ သူလိုချင်တာက ဘေဘီဘွိုင်းတဲ့ ။ ခက်တာက ဆိုင်မှာက ဘေဘီဘွိုင်းအရုပ်က မရှိ ။
တကျီကျီ နဲ့ကို စိတ်ရှုပ်လာတာနဲ့ မောင်မောင်လေးက မေမေ့ဗိုက်ထဲမှာဆိုတော့ ပျော်ပြီး ဗိုက်လာကိုင် နားနဲ့ကပ်နားထောင်ပြီး ဘာမှလဲမကြားရဘူးနော် မာမီ တဲ့ ။
မပြီးသေးဘူး သူ့အဖေ ကို သွားပြောတယ် ဒယ်ဒီ ဒယ်ဒီ ဒီမှာ မောင်မောင်လေးက မေမေ့ဗိုက်ထဲမှာတဲ့ ။ သူ့အဖေ က မရှိပါဘူးသမီးရဲ့ ဖေဖေ က မောင်မောင်လေး မလိုချင်ဘူးနော် ဆိုတော့ ပြန်မေးတယ် ။ ဒယ်ဒီ က ဟေမာ့ကို အရမ်းချစ်လို့ မောင်မောင်လေး မလိုချင်တာလား တဲ့ ။
ဒါပေါ့ဆိုတော့ ပြုံးသွားရော ။ ဂလိုမှန်းသိ မေမေ လဲ သမီးကို အရမ်းချစ်လို့ မောင်မောင်လေး မလိုချင်ဘူးပြောရမှာ ။ နောက်တခါတေ့ာ လည်သွားပြီ
December4,2014
မနက် အိပ်ယာထ မိုးကရွာ သားအမိ နှစ်ယောက် အိပ်ယာထဲ နှပ်နေရင်း သူ့ကျောလေးပွတ်ပြီး သီချင်းဆိုပြတာ twinkle twinkl little star ဆိုတာကို ဟေမာ ဟေမာ လစ်တဲလ်စတား ဆိုပြီးတော့လေ ။ အဲဒါကို မယ်လက်တောက်က ဟေမာ့ကို little star လို့ မပြောပါနဲ့ big star လို့ ပြောပါတဲ့ ။ အွန်းနီကမှ little star တဲ့ လေ။
အွန်းနီဆိုတာ ဘယ်သူတုန်းဆိုတော့ ဟေမာ့ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတဲ့ ။
သာယာနေတဲ့ မအေ စိတ်လေ သွားလို့ ရုံးထွက်လာခဲ့တယ်
December 1 ,2014
ဟေမာ က ပင်ဂူးလေးကိုလဲ ချစ်တာပဲ ။
ခက်တာက ပင်ဂူး က ရှေ့ကနေ ရှာရှာပေါက်ပေါက်ကစားရင် သူလဲ လိုက်ကစားချင်တာ ခက်တာပဲ ။ အိမ်မှာလဲ ပွ လို့
ဟေမာ သိပ်ကြိုက်တဲ့ ကာတွန်းတွဲ (Маша и Медведь - Большая стирка (Серия 18) | Masha and The Bear (Episode 18))
ပြောသေးတယ် မာမီ မာရှလေးက သိပ်ကို နော့တီးတာပဲနော် ။ မာမီက နော့တီးတာကို ချစ်တာလား နဲ့ စကားဝယ်သေးတာ ။ လည်ချက်
မနှစ်က ဟေမာတို့ Graduation ပွဲနီးလာတော့ ဒီသီချင်းလေးကို ဖွင့် ဖွင့်ပြီး သူ က နေတာ တွေ့တယ် ။ အမှန်တော့ အဲဒီနေ့မှာ က ရမှာမို့ သူ ကျင့်နေတာ မအေ က မသိဘူး ။
အချိန်တွေက ဘာမှ မကြာသလိုပဲ တနှစ်ကုန်သွားတာ ခနလေးလိုပဲ ။
ဒီနှစ်တော့ ဘာသီချင်းမှ ဖွင့်တာလဲမတွေ့ဘူး ။ ည တုန်းက မအေ က ဆမ်ဆောင်းဖုန်းထဲက ရစ်စမတ်သီချင်းလေးဖွင့်ပြပြီး သမီးရေ ဒီဇင်ဘာရောက်ပြီနော် ဆိုတော့ မော့ တောင်မကြည့်နိုင်ရှာဘူး ။ အခု သူ ဇာတ်လမ်း စီးရီးစ်တွေ ကြည့်နေတာ ။
ဘာပဲ ပြောပြော မနက်တိုင်း သူ အိပ်ယာက နိုးလာရင် မာမီ အိုင်လပ်ဖ်ယူ ဆိုတာလေးနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကို ကိုယ် အားဖြည့်ရတယ်။
Posted by Thandar Lwin at Wednesday, January 21, 2015 No comments:
ကိုချစ်မောင်ကြီးရဲ့ ဒီနှစ်မွေးနေ့မတိုင်ခင် မှာ သမီးလေးက နေမကောင်းတာရော၊ ညဘက်ဆို သမီးလေးကို အချိန်ပိုပေးဖြစ်တော့ ကွန်ပျူတာရှေ့မထိုင်ဖြစ်တာရော နောက်ပြီး သူ့မွေးနေ့မှာ သူ့အတွက်အချိန်အပြည့်ပေးခဲ့တာတွေကြောင့် သူ့အကြောင်းတွေကို အမှတ်တရ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး ။
နောက်ပြီး ကိုယ်ကအသက်ကြီးလာတာလဲပါမယ် ။ နောက် ၂၀၁၄ မှာ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးခင်မင်ခဲ့တဲ့သူတွေရော ၊ အင်တာနက်ကျေးဇူး နဲ့ ကမာကြီးက ပိုပြီးလုံးလာတာကြောင့် လူတွေအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သေကြတာကို ကြားရ သိရတော့ မွေးနေ့ဆိုတာကို အထူးတလည် လုပ်ပြီး ရေးမနေချင်တော့တာရော ပေါ့ ။
သူ့ကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာထက် သူကိုယ်တိုင်သူ့မွေးနေ့မှာ ကောင်းမှူကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
အိမ်ကဘုရားမှာ အာရုဏ်ဆွမ်း ၊ သစ်သီး ၊ ပန်း၊ ရေချမ်းတွေကပ်ဖို့ကတော့ မွေးနေ့မှမဟုတ်ပါဘူး နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာပါ ။ ဖားအောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပါ အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်ဖို့ ပြင်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ဖားအောက်ကျောင်းမှာ ကြာသာပတေးနေ့တိုင်း နေ့ဆွမ်းအတွက် ဟင်းချက်ကပ်ခဲ့တာတော့ နှစ် နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ ။ အခုတော့ သောကြာနေ့မှာပါ အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်မယ့်သူမရှိဘူးဆိုလို့ သောကြာနေ့တိုင်း အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်ဖို့ တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ် ။
ဒါကတော့ သူ့အတွက် ကိုယ်တိုင် ဖုတ် ပေးခဲ့တဲ့ ချိစ်ကိတ်ပါ ။ သမီးလေးအကြိုက် ကိတ်သားထဲမှာပါ စတော်ဘယ်ရီ ၊ ဘလူးဘယ်ရီ အသီးအစစ် ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
အိမ်သားတွေအတွက်ချက်ပေးခဲ့တဲ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲပါ ။ Feel က ရွှေအိနို့စိမ်းခေါက်ဆွဲကို Feel က ငါးဖယ်ကို အုန်းနို့ နဲ့ ဆီသတ်ပြီး ချက်လိုက်တာပါ ။ လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး အရသာကတော့ တကယ်ပါ အဟုတ်ပါ ဂွတ်ရှယ်ပါ ။
ဖေ့ဘုတ်မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့ သူ့အကြောင်းတွေ၊ သူနဲ့ ဆက်စပ်နေတာလေးတွေ
မနေ့က ကစားကွင်းကအပြန် ၀မ်းနည်းနေတဲ့ မယ်သံ့ကို ကိုချစ်မောင်က ရှင်းပြပါတယ် ။
ပထမပွဲမှာ ကြည်လင်းမပါဘူးတဲ့ ကျော်ကိုကိုက ကြည်လင်းနဲ့ အတွဲဆိုတော့ စလုံးကို ဂိုးပေးလိုက်ရတာပေါ့ တဲ့ ။
ဒုတိယပွဲမှာတော့ ကြည်လင်းပါလာပါတယ် ။ ဘယ်တောင်ပံမှာနေရာချတာ ကျော်ကိုကို နဲ့ ကြည်လင်းက အတွဲဆိုတော့ အချိတ်အဆက်နဲ့ ဂိုး ၂ဂိုး သွင်းပေးနိုင်ခဲ့တာပဲ ။ နောက်တော့ ကြည်လင်းကို ညာတောင်ပံဘက်ကို နေရာပေးလိုက်တယ်တဲ့ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကြည်လင်း က လဲ နာနေတာလဲများနေပြီ တဲ့ ၊ ကျော်ကိုကိုကလဲ ခြေကျသွားပြီတဲ့ ...နောက်တယောက်ကို သူပြောသေးတယ် နာမည်မမှတ်မိ ။ အဲဒီတယောက်လဲ တော်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အရံထဲမှာ ထည့်ထားတယ်တဲ့ ။
မနေ့က ကစားတဲ့ U22 မှာ ကျော်ကိုကို နဲ့ ကြည်လင်းအတွဲ ကို ပဲ အားထားရတယ်တဲ့ ။
ကျမ ကတော့ ဘောလုံး ဆိုတာကို သိပ်ဝါသနာမပါ စိတ်မ၀င်စားတဲ့သူမို့ သူပြောပြသလောက်သိရတာပါပဲ ။ ကိုချစ်မောင်လဲ ဘောလုံးပွဲတွေကို အချိန်ပေးကြည့်တာ တို့ ဘောလုံးဂျာနယ်တို့ ဖတ်တာတို့ သိပ်မတွေ့ရတော့ သူသိတာက တကယ်လား ဟုတ်ရဲ့လားတော့ မသေချာဘူး ။ ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းနေတဲ့ ကိုယ့်ကို ၀မ်းမနည်းပါနဲ့ကွာ ဒီကောင်တွေက အသုံးမှမကျပဲ ဘာညာတွေနဲ့ ပြောပြီး ဖြေသိမ့်မပေးပဲ ဘောလုံးပွဲ လာကြည့်တဲ့သူကို ပွဲရဲ့ သဘောတရား အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး စိတ်ကို အာရုံလွှဲပေးတော့ စိတ်ကျေနပ်သွားတာပေါ့လေ ။
တဆက်ထဲ ဆက်ပြီးစဉ်းစားမိတာက ဘောလုံးပွဲက လူ ၁၁ ယောက်ကစားရတဲ့ Team work ။ အဲဒီလို အဖွဲ့လိုက်မှာ မှ ဒီလူပါမှ ဒီလူနဲ့မှ အတွဲရယ်လို့ ဆိုရင်တော့ အဖွဲ့သား ၁၁ ယောက်လုံးဟာ တသားထဲမကျတဲ့သဘော မို့ အသင်းလိုက် အဖွဲ့လိုက်ကြိုးစားယူမှ ရမယ့် အောင်မြင်မှူကို မရနိုင်ခဲ့တာဟာ မထုးဆန်းပါဘူး လို့ ပြောရမယ် ။ အောင်မြင်ချင်မယ်ဆိုရင်တော့ အဖွဲ့သား ၁၁ ယောက်လုံးဟာ ညီညွတ်တဲ့စိတ်၊ တသားထဲဖြစ်မယ့် အင်အားတွေ ( စိတ်ရောလူရော) ကို အရင်ပေါင်းစည်းရမယ် ။ အဲဒီအတွက် အလေ့အကျင့်ကို အရင်ယူရမှာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
ကလေးတယောက် အမေ မို့ အလုပ်များအချိန်မအားပါဘူး လို့ပြောနိုင်တဲ့ ကျမအတွက် ကိုယ်ဝါသနာမပါတဲ့ ဒီဘောလုံးပွဲကို ဘာကြောင့်သွားကြည့်ရသလဲဆိုတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံ ဆိုတာ သိစေဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပေးမယ့် မောင် တွေကို သွားပြီးအားပေးတာပါပဲ လို့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောကြည့်ချင်ပါတယ် ။
ပွဲမှာ ကိုယ့်မြန်မာအသင်း မအောင်မြင်ခဲ့တာတွေ ကို ဘာပြောချင်လဲ ဘယ်လို ခံစားရသလဲ ဆိုတော့ မြို့မှာ ပညာသွားသင်တဲ့မောင် စာမေးပွဲကျပြီး ပြန်လာတာကို ပညာမတတ်တဲ့အမကြီးက ထမင်းအိုးမွှေနေရင်းက ပြေးထွက်ကြိုသလိုမျိုး ဘာပြောရမှန်းမသိ ယောင်းမကြီးကိုင်ပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ဆိုသလိုမျိုးပေါ့ ..........။
အားလုံး ညီညွတ်စွာပေါင်းစည်းနိုင်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှူကို ရရှိနိုင်ပါစေ လို့...........။
ကိုချစ်မောင် ကိုချစ်မောင် နဲ့ ပါးစပ်ဖျားကမချ တပြောထဲပြောရအောင် သူက ဘာတုန်း ဘယ်လိုတုန်း နဲ့ ဖဘကြီးခေတ်စားခါမှ ပြန်တွေ့ကြတဲ့ သယ်ရင်းတွေက မေးတဲ့သူကမေးကြတော့ ရှက်လာတာနဲ့ မဖြစ်သေးဘူး ကိုချစ်မောင် မကောင်းကြောင်းတွေရေးဦးမှ ဆိုပြီး ရေးတော့မလို့ ကို သူ့မကောင်းကြောင်းကလဲ ရှာလို့ကို မတွေ့ဘူးတော် ...ဟိုသီချင်းလိုပဲ အပြစ်မမြင်ပါဘူး ချစ်ချင်တာပဲ သိတယ်နော့ ဆိုလား အဲလိုပဲ ။ တကယ်တော့ အပြစ်တင်တာ အပြစ်ပြောတာ ဟာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုပဲ ပေးတာဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားပါနော် ။ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ မို့ ခလုတ်တိုက်ပြီး မေ့သွားတာပဲနေမှာပါ ။ လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ခင်ရင်ဖြင့် အပြစ်မပြောကြေး ။ အဲလေ ပြောသင့်တာ ၊ သူတခုခုမှားနေတာကို သတိပေးချင်တာဆိုတောင် အကျိုးအကြောင်းပြောပြနည်းနဲ့ သူ့ဟာသူပဲ ဆုံးဖြတ်စေတာ ကောင်းပါတယ် ။
ဘာပဲပြောပြော စာလေးလဲရေးချင် အန်နဗာဆရီ လဲ နီးလာပြီမို့ ကိုချစ်မောင်ကောင်းကြောင်းတွေ ဆက်ရေးပါရစေဦးလို့ ..။
မယ်သံ ..ကိုချစ်မောင်ရဲ့ ဘာရဲ့ နဲ့ ချစ်ကြောင်း ကောင်းကြောင်းရေးတော့မယ်လို့ လေသံပစ်ရင် အိမ်ကဘိုးတော်မျက်ခုံးလှုပ်တယ် ။ သူ့ ခွက်ဒစ်ကတ်လေးကိုတော့ သုံးတော့မယ် ၊ သူ့ ကတ်ထဲက ဂဏန်းလေးတွေ တောင်ပံပါရင် မင်းဆီကိုးဆိုပြီး နောက်လှည့်မကြည့်တမ်း ပျံထွက်သွားတော့မယ် အဲဟယ် ။
သူလဲ ကိုယ့်ကို သီချင်းဆိုပြချင်ပါတယ် တဲ့ မင်းမချစ်လဲနေပါ ရတယ် မင်းမချစ်လဲနေပါရတယ် ဆိုပြီးတော့ ( အင်္ကျီအိပ်ကပ်ကို ဖိပြီး ညက်မှောင်ကြီးကြုတ် နေတဲ့ ခေတ်သစ်ဦးကပ်စေးကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါရန်)
အခုတလော ဖဘမှာ လင်ကွာမယားကွာတွေ ခေတ်စားတော့ ဘဲဥမ လဲ စိုးရိမ်လာပါတယ် ။ ဘဲဥ က စားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် လဲ အကိုကာလသားတို့အတွက်တော့ လျှာရင်းမမြက်ဘူးမဟုတ်လား ။
အင်း ကိုဒန့်သလွန် လဲ ဗမာကားတွေကြည့်ရင် ဟို ချစ်စရာ လေး စကားချွဲချွဲလေး ပြောတဲ့မင်းသမီးကားတွေကြည့်တာတွေ့တယ်ပေါ့ ။ အဲဒီမင်းသမီးလေးဟာ ထစ်ဆို ငိုလိုက် စိတ်ကောက်လိုက် ရန်တွေ့လိုက် နဲ့ ကိုဒန့် တို့ ပါးစပ်ကြီး မစိ ပဲ ကြည့်နေတာတွေ့တော့လေ ကိုယ်လဲ ၀ါသနာမပါပေမယ့် အဲလို လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလားပေါ့လေ ။
အဲဒါနဲ့ သေချာအောင်မေးကြည့်ဦးမှပါပဲဆိုပြီး ...
ဘဲဥးကိုဒန့် ကိုဒန့်
ကိုဒန့်းဘာတုန်းဟ
ဘဲဥးဟိုလေ ကိုဒန့် ဘယ်လိုကြိုက်မှန်း မသိလို့ တခုခုဆို ကိုဒန့်က ဆူလိုက်ရင်လေ ငိုတာမျိုးကြိုက်လားဟင် ဟို မင်းသမီးလိုမျိုးလေးလေ
ကိုဒန့်း သဘောပဲ ငိုချင်ငို မငိုချင်နေ ။ ငိုလဲ မသနားဘူး မငိုလဲမသနားဘူး
( မငို လိုက်ရဘူး ရယ်လိုက်တာနဲ့ တကြောပြတ်သွားတယ် :P)
ဘဲဥးဟိုလေ ဟိုမင်းသမီးလေး ငို ရင် ကိုဒန့်သဘောကျတယ်လေ အဲလိုမဟုတ်ဘူးလား ။ တို့ ကလေ ကိုဒန့် သဘောကျအောင် ငိုကျင့်မလို့လေ
ကိုဒန့်းရူးလိုက်တာကွာ ။ မင်းသမီး ငိုတာက သူ့ဟာသူ ငိုတာ ၊ ကိုယ်ဘာမှ သွားလုပ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူး ။. မင်း ငို ရင် ကိုယ်က ဒီတိုင်းနေတော့လဲမကောင်း ၊ ချော့ပြန်လဲ မင်းကအခွင့်အရေးတောင်းဦးမယ် ။ ကိုယ့်အတွက်တော့ မကောင်းဘူး ။
December 27, 2014 ( အကယ်ဒမီ ပေးပွဲ အမှတ်တရများ)
မယ်သံးအို ကိုရန်လေး စကားထစ်လဲ ချစ်တာပါပဲ လို့ သူ့သီချင်းတွေ စိတ်ညစ်တိုင်းနားထောင်နေတဲ့ဟာကို ..
ယောက်ျားးးးးး ညီးချစ်တာတွေများနေတယ် ယောက်ျားကလွဲရင်အကုန်ချစ်နေသလားတဲ့ ...
မယ်သံးဟမ် ကတောက် မင်းဦး ရသွားတယ် ချီးထုတ်
မင်းဦးးးး လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ ချစ်ခြင်းရဲ့ သင်းချိုင်း ၊ အဲဒါကြောင့် မင်းကိုငါ လက်မထပ်ခဲ့တာ ..
ကိုဒန့်းးး အိုင်းယိုး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်က ဒီစကားလုံးမျိုး ဘာလို့ မကြားဖူးခဲ့ပါလိမ့်
ဘဲဥမးးး ဂါးးးးးးးး
ကိုဒန့်းးး ဟာ ဒါတော့ရသင့်ပါတယ်ကွာ သရုပ်ဆောင်လေးက ကောင်းတာကိုး ထင်တောင်မထားဘူး ။ ၀မရရ ငါတောင်ကြိုက်သွားပြီ
ဘဲဥမးးး ဟွန်းး လူမင်းတို့နဲ့ ဂလောက် ပလူးနေတာ ရမှာပေါ့ ။ ကြည့်ပါလား ကျေးဇူးတင်စကားကိုက ငဖားမကြီး ဟွန်း
ပြေတီဦးတော့ လုံးဝမကြိုက်တာ ဘယ်လို လုပ်ရသွားမှန်းကိုမသိတာ .....
ကိုဒန့်းးး ညီး မောင် နဲ့ တူလို့ရတာအေ့
ဘဲဥမးးး ဒီလူတော့ ကြောင်နေဘီထင်တယ် ငါ့ကို ဘောက်ချည်းပြောနေပါလား အကယ်ဒမီပြီးရင် ထမင်းပွဲပြင်ကျွေးနေရဦးမယ် အခန်းထဲဝင်နေမှ:P
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး အမှတ်တရပါ ။ အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ :D
Posted by Thandar Lwin at Thursday, January 08, 20154comments:
Posted by Thandar Lwin at Friday, January 02, 2015 No comments: